တံခါးလုပ်ငန်းရှင်များဆွဲယူဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးအလိုအလျောက် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးကိုဖွင့ ်.,တံခါးမော်တော်ဆွဲယူ Glass ကို,အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးစနစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > မော်တော်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် > တံခါးလုပ်ငန်းရှင်များဆွဲယူဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးအလိုအလျောက်
အဆိုပါမော်တာတိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုများအတွက် In-built optical sensor ကိုအတူ brushless 24 ဗို့ DC ကဖြစ်ပါသည်, စစ်ဆင်ရေးမြင့်မားသော torque နှင့်မြင့်မားသော Operating အမြန်နှုန်းပို့, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနစ်မဆိုလုံခြုံရေး / နှိုးဆော်သံစနစ်များကိုမှချိတ်ဆက်မှုအတွက်အစီအစဉ်နိုင်ပါတယ်ဥာဏ် Controller, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စံကိုက်ညှိဖြစ်ပါသည်, တံခါးကိုစတုတ်နှင့်ဘရိတ်ရာထူးပေါ်မှာရှိသမျှဒေတာအတွက်မှတ်ဉာဏ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအော်ပရေတာ built-in ဖြစ်ပါတယ် (ပြန်ဖွင့်ဘက်ထရီ) မပြတ်မတောက် power supply ပါဝါပျက်ကွက်နေစဉ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး။
ခါးပတ် Drive ကို
Drive ကိုဖိုက်ဘာမှန်ဆန့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအားဖြည့်ထားတဲ့သွားခါးပတ်၏လမ်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အဲဒီမှာပေါ်သွားကာကွယ်မှုများအတွက်မျက်နှာပြင် facing နိုင်လွန်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်အသံတိတ်တိကျစစ်ဆင်ရေးထုတ်လုပ်သည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းခြေရာခံ Self-သန့်ရှင်းရေး duel linear ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်လမ်းကြောင်းခက်ခဲအားကောင်းလွိုင်း 6351T6 ၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ထို transom ရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘီးပုံဖမ်းတွန်းလှည်းကိုမဆိုထိန်သိမ်းအခမဲ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူအလွန်ခိုင်မြဲစွာတပ်ဆင်တံခါးများအတွက်ရရှိလာတဲ့, Anti-မြင့်တက်ဘီးတပ်ဆင်ထားပါသည်။
လြှပျစစျသော့: တစ်ခုကလျှပ်စစ်သော့ခတ် option ကိုစုစုပေါင်းလုံခြုံရေးပေးရမရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်လက်စွဲစာအုပ်သော့ခတ်, ကိုယ်အောင်မြင်မရနိုငျဘယ်မှာအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။ အီး Frameless Glass ကိုတံခါးများပိုပြီးတင်းကြပ်လိုက်ပါတယ်။ သော့ခတ်သည့်မိုက်ခရိုထိန်းချုပ်လျှပ်စစ်သော့ခတ်စနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမိုက်ခရိုသော့ခတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်စောင့်ကြည့်။ သော့ခတ် 100% ဆောင်ရွက်နေသည့်အခါတံခါးကိုသေချာစေရန် EG အပြည့်အဝတံခါးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ terminal လက်ငင်းလုံခြုံရေးစနစ်နှစ်ခုလုံးတံခါးကိုရာထူးနှင့်သော့ခတ် status ကိုအချက်ပြမှရရှိနိုင်ပါသည်။
လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့လျှင်တံခါးကိုစစ်ဆင်ရေးအလိုအလျှောက်ဖြစ်စေဦးတည် reverse မည်ဟု sensitivity ကို setting ကိုသည် Programmable ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး 18 လအစိတ်အပိုင်းများကိုအာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ
ရှည်လျားသောအတူ 1. ဘဝဝတ်ပြု Controller ကိုအဆင့်မြင့် CPU ကို chip ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအသုံးပြုမည်။ operating parameter သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်သရုပ်ပြရလိမ့်မည်။
2. Parameter အဆင်ပြေနှင့် nimberly ချိန်ညှိနေသည်။
အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးကိုဖွင့ ်. တံခါးမော်တော်ဆွဲယူ Glass ကို အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးစနစ် အလိုအလျောက်ဂိတ်တံခါးဖွင့် အလိုအလျောက်ဆွဲယူ Glass ကိုတံခါးဖွင့် အလိုအလျောက်ဆေးရုံတံခါးဆွဲယူ အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးမော်တော် အလိုအလျောက်စက်မှုတံခါးမြန်